कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं : सरकारले हात उठायो, अब भगवान भरोसा ! - Himali Patrika
कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं : सरकारले हात उठायो, अब भगवान भरोसा !
हिमाली पत्रिका २३ असोज २०७७, 7:43 am
अस्पतालमा आइसियु बेड पनि रित्तिँदै
पीसीआर पोजिटिभ भएका संक्रमतिलाई आइसोलेशनमा राख्नुपर्छ । काठमाडांै उपत्यकामा आइसोलेसन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समन्वय गरेर विभिन्न स्थानमा बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । कतिपय ठाउँमा बनेको छ । कतिपय स्थानको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा पनि रुपान्तरण गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बताए । भक्तपुरमा रहेको कृषि विकास बैंकको सभाहलमा बनाईएको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाइएको छ ।
आवश्यक पर्यो भने भोली ती क्वारेन्टाइनस्थललाई आइसोलेशनमा रुपान्तरण गर्न सकिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बताउँछन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अस्पतालमा उपचार गर्ने बेड भरिएपछि बैकल्पिक उपाय सोच्ने, प्रयोग नभएका क्वारेन्टिनलाई आइशोलन बनाउनेतिर लागेको छैन ।